Waqtiga la aasayo ra’iisul wasaarihii hore ee dalka oo la shaaciyey |
Waqtiga la aasayo ra’iisul wasaarihii hore ee dalka oo la shaaciyey
Guddiga heerka qaran ee loo saaray qaban qaabada aaska ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya -AHN- C/risaaq Xaaji Xuseen, ayaa kulan ay magaalada Muqdisho ku yeesheen, waxay ku go’aamiyeen waqtiga iyo goobta uu aaska marxuumku ka dhici doono.
Wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Ridwaan Xirsi Maxamed oo xubin ka ah guddiga qaban qaabada aaska, ayaa sheegay in meydka marxuumka berri o oJimce ah magaalada Muqdisho la keeni doono.
Isla berri oo Jimce ah ayuu sheegay in lagu aasi doono magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya. Jinaasada C/risaaq Xaaji Xuseen, waxaa kasoo qayb gelaya -sida uu wasiirku sheegay- wufuud tira badan oo dalka iyo dibaddiisa ka kala imaan doona.
“ waqtiga la aasi doono waa maalinta Jimcaha, waxaana lagu aasi doonaa magaalada Muqdisho…aaska waxaa kasoo qayb geli doona wufuud tira badan oo ka kala socota dalka iyo dibadda…” wasiirka ayaa sidaas yiri.
Wufuudda badankooda ayaa ka imaan doona dalalka Jabuuti, Kenya, Uganda, Itoobiya Midowga Yurub iyo Maraykanka. Sidoo kale waxaa aaska kasoo qayb geli doona madaxda maamul goboleedyada dalka sida: Gal-mudug Jubba iyo Puntland,.
C/risaaq Xaaji Xuseen oo ahaa ra’iisul wasaarihii labaad ee dalka Soomaliya uu yeesho kaddib markii uu xornimada qaatay 1960-kii, wuxuu lix maalmood kahor ku geeriyooday magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka.